Alert: Please Read!
Ooredoo Change/Edit SIM Registration
Login to perform the Change/Edit SIM Registration
မိတ်ဆွေ၏ဆင်းကတ်အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲရန် Login ဝင်ပါ။
Follow the easy steps below and change/edit your SIM details
Myanmar National / မြန်မာနိုင်ငံသား
Please upload your Passport page/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏စာမျက်နှာအားတင်သွင်းပါ
Employee ID front page/၀န်ထမ်းကတ်အရှေ့ဘက်စာမျက်နှာ
Employee ID back page/၀န်ထမ်းကတ်နောက်ဘက်စာမျက်နှာ
NRC front page/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား အရှေ့ဘက်စာမျက်နှာ
NRC back page/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား နောက်ဘက်စာမျက်နှာ
Other Documents / အခြားစာရွက်စာတမ်းများ
I confirm that the information I have provided is accurate and correct to the best of my knowledge. I understand that Ooredoo’s use and disclosure of this information and my use of Ooredoo’s services will be subject to terms and conditions that are published on Ooredoo’s website at www.ooredoo.com.mm (including the fair usage policy)
Your VIP points will be carried forwarded only if the change of ownership is done for the 1st time for your SIM information. More than once changes of SIM ownership will not be eligible for any VIP points carry forward from your account.
ကျွန်တော်/ကျွန်မဖြည့်သွင်းထားသောအချက်အလက်များမှာတိကျမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များကိုအူရီဒူးအနေဖြင့်ထုတ်ဖေါ်အသုံးပြုမှုနှင့်ကျွန်တော်/ကျွန်မ၏အူရီဒူးဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုမှုသည်တရားမျှတသောသုံးစွဲမှု မူဝါဒအပါအ၀င်အူရီဒူး၏၀က်ဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်သည့် www.ooredoo.com.mmတွင်ဖေါ်ပြထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီသာဖြစ်ကြောင်းနား လည်သဘောပေါက်ပါသည်။
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ပထမအကြိမ် မိမိ၏ ဆင်းကတ်အား အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ဆောင်ပါက VIP အမှတ်များကို ဆက်လက် သယ်ဆောင်သွား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသော အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း အားပြုလုပ်ပါက မိမိ၏ VIP အမှတ်များအား သယ်ဆောင်သွား နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။